Tag: maitiro ekumisa blogger | Martech Zone
Tag: maitiro ekumisa blogger
Munguva yakapfuura, ini ndakanyora nezve maitiro ASI kumisa blogger. Iyo saga inoenderera apo ini ndichiwana rukova rusingagumi rweasina kugadzirira hukama hweveruzhinji vasina ruzivo rwandinoda kusimudzira zvigadzirwa zvevatengi kana masevhisi. Zvakatora chinguva kuti unyatso tora iyo tangi yaive yakafanira kuratidza. Ini ndakagamuchira email kubva kune yemagariro midhiya masystem neSupercool Creative. Supercool isangano rekugadzira rinogadzira online vhidhiyo yekugadzira